Mararoo yeroo gaa'eelaa
Afoolli Oromoo hambaa abaabileefi akaakileerraa afaaniitiin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe; ammas darbaa jiru; garafuulduraattis darbuudha. Kana jechuun ummanni Oromoo durii kaasee yaada, ilaalcha, ergaa, falaasama, fedhiifi abdiisaa, gaddaafi gammachuu qabu afoolaan dabarsaa ture jechuudha. Kanaafuu, Afoolli Oromoo hambaa ganamaafi calaqqee aadaa Oromooti.
Afoolli Oromoo dilbii bara dheeraati; cirracha bishaaniiti; hammaaramee (lakkaa'amee) hindhumu, galaana waraabamee kan dhumu miti. Barreeffama kanaan afoola akka galaanaa ummanni Oromoofi golli Oromiyaa qabdu keessaa mararoo gaa’elaa irratti xiyyeeffachuun kan isiniif dhiyeessinu ta’a.
Aadaa gaa’elaa ykn warroommii keessatti mararoon gaa’elaa shamarran Oromoo biratti baay’ee kan jaalatamuudha. Xiyyeeffannaan weedduusaaniis tokko soddaa arrabsuu ykn ceepha’uudha. Kan biroo immoo mararoo ykn seenaa dhaamuudha.
Durbi Oromoo heeruma irratti boohaa kan mararoo dhaaman sababii maatiifi qomoosaaniirraa adda bahuu waan jibbaniif qofaa miti. Fedhii malee heerumuun, umurii malee heerumuufi kan kana fakkaatan ta’uu malu. Fakkeenyaaf durbi tokko fedhii ishee malee heerumuushii walaloo mararootiin yoo ibsattu akkas jechuun weeddisti:
Hennaan haama yaa kaloo
Hin afin ijjeerradhuu
Seenaan dhaama yaa haadha koo
Hin rafin dhaggeeffadhuu
Yoo rafteef qalbeeffadhuu. Jechaa komii qabdu walaloodhaan ibsuu eegalti. Keessattuu gurbaan itti heerumtu baay’ee fokkisaa yoo ta’e akka itti aanutti weeddifti.
Yaa biyya abbaa koo
Yaa biyya Noolee
Yaa bada abbaa koo
Koot kana ilaalii
Yaa warra keenyaa
Maaf nama waamtuu
Maaf nama laattuu
jechuun nama hintaaneefi fokkosaatti heerumuushee ibsatti.
Umriin ishii osoo hinga’in kan heerumsiisan yoo ta’e immoo komii qabdu akkas jechuun weeddifti.
Harmi koo hinbaanee
Ni quuqxe malee
Yaa aayyolee koo
Laanni koo hingeenyee
Na quufte malee
Ulee geeshee muruu
Maaf na laatta haadha koo
Anoo beekee hinbuluu.
Yaa abbayyee koo
Maaltu maal ta’ee
Kan badii ta’ee
Iddoo ciisa koo gumbii dhaabbadhuu
Cabaa irbaata koo dilbii kaawwadhuu
Dibaa mataa koo samaa kaawwadhuu.
Gomboo gumaataa, Hundatu baataa
Na jala buutee, Akka tumaataa
Hin geenyeen geessee Fagoon dhiyaattee.
Yaa obbolee koo
Gadi bahaatii, Gorbatti siiksaa
Guyyaa kennaa koo, Torbeetti hiiksaa
Gaafa torbee koo, Kurnootti hiiksaa
Gaafa kurnoo koo, Malli funyoo koo.
jechuun heerumaaf kan hin geenye ta’uu ishii wantoota adda addaa wabeeffachuun ibsiti.
Komiin durbaa mararoo keessatti calaqqisu inni kan biraa osoo hinjaalatiin horiin ykn qarshiin jijjiiramuudha. Walaloon armaan gadiillee kanuma dhugoomsa.
Ani ji’an se’ee
Ani jiran se’ee
Yommuu an xinnoo
Amma maal goonaan
Yommuu na biraa
Dhala kee gattaa?
Yaa aayyoolee koo
Yoo re’een dhaltee
Yoo hiriyeen dhuftee
Eebichi yoo murmuran
Akkuma duraan jenne durbi Oromoo guyyaa cidhashii mararoo weeddisaa kan boossuuf sababii jiran keessaa tokkko yaaddoodha. Yaaddoon garuu maatiirraa adda bahuu jibbuu qofa miti. Qarree dhabuufi dhiibbaan gama dhirsaatiin ishiirra ga’uuf jirus kan yaaddessan keessaa kan biroodha. Kana hunda walaloo mararoo armaan gadiirraa hubachuu ni danda’ama.
Kan qarmii keessaa
Yaa obbolaa koo
Kan lammii keessaa.
Mana abbaa ofii
Mana abbaa hormaa
As taa’iin saadaa
Yaa haayyolee koo
Mana haadha hormaa
Akka durii koo
Ya marii maroo ya maraassisaa
Haadha ofii dhabuun
Haadha hormaatti hafuun
Kunoo yaate kaa
Du’a ga’iin koo
Du’a koo mitii
Du’a qarree koo.
Harmee yaa haadha koo
Waa’ee qarree koo
Itti naa himii
Qarreen koo hingaltuu
Garaan koo hinfayyuu.
Yommuu intalli haala kanaan yaaddoo ibsachaa hinqirfattee boossu hiriyoonni durbaammoo jalaa qabuudhaan akkas jedhu:
Agadaa quncee nyaatuu
Jajjabaadhu yaa hiriyee
Manni abbaa hundee hintaatuu
Halagaan fira haa taatuu.
Gombisaan tarree galee
Boobee laga hindhaabinii
Eenyufaatu qarreetti hafee
Boossee nama hinraasinii.
jechuudhaan weeddisaa jajjabeessu.
Walumaagalatti, mararoon gosa afoolaa keessaa tokko ta'ee kan dubarri heerumuf jettu ergaa ittiin dhaammattudha. Kun garuu wayita ammaa iddoo hedduutti dagatamaa dhufeera. Kanaafuu Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaafi kanneen dhimmichi ilaallatu aadaan kun akka hindagatamneef hojjechuu qabu. Dubbistoonnis mararoowwan yommuu cidhaa naannawaa keessaniitti sirbaman barreessitanii yoo nuuf ergitan kan dhiheessinu ta'a.
Madda: Dirribaa Tarrafaa. Giddugala Aadaa Oromootti, Qindeessaa Garee Moggaasa jechootaafi Waaltina Afaan Oromoorraa.
Torban kana/This_Week 10569
Torban darbe/This_Month 96926
Guyyaa mara/All_Days 1435349